တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ရှင်းလင်းသော 800 Camera ကို Bexel ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Bexel တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ရှင်းလင်းမှု 800 ကင်မရာမိတ်ဆက်
New Orleans, ဖေဖော်ဝါရီလ 2017, 19 အပေါ် LA ကအတွက် 2017 NBA Allstar ဂိမ်းမှာ Bexel ။ (ဘင်ရှောလမုန်သည် / BEXEL)
Bexel တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ရှင်းလင်းမှု 800 ကင်မရာမိတ်ဆက်
BURBANK, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2017 - Bexel ကို Global အသံလွှင့် Solutions, ထုတ်လွှင့်န်ဆောင်မှုများဦးဆောင်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ပံ့ပိုးပေးသည် Bexel ရှင်းလင်းမှု 800 ကင်မရာ, ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးသေးသေးလေး, High-frame ကို-နှုန်း (HFR) Point-of အမြင်ကင်မရာနဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါသည်။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်အတွက်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်ကင်းအတွေ့အကြုံအပေါ်အဆောက်အအုံ, Bexel High-အရည်အသွေး, Real-time HFR ဗီဒီယိုအတွက်အားကစားပွဲနှင့်အခန်းအနားထုတ်လုပ်သူများ '' ကိုတိုးမြှင့်ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်စံ-setting ရှင်းလင်းမှု 800 ကင်မရာစနစ်အားတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
"ဖောက်သည် '' တောင်းဆိုနေတာထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုထောက်ပံ့ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများ - တရားရုံးအနေဖြင့်ရေခဲမှ - Real-time အပြောင်းအလဲနဲ့အတူ High-Speed ​​ကိုကင်မရာအတွက်ခိုင်မာတဲ့စျေးကွက်ဝယ်လိုအားရှိခဲ့ပါသည်ထင်ရှား," Edd Bonner, အင်ဂျင်နီယာနှင့်စစ်ဆင်ရေး၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Bexel ကလည်း, ။ "ကျနော်တို့ကလည်း HFR များအတွက်ကြီးထွားလာဝယ်လိုအားနှင့်တိုက်ရိုက်အားကစားများအတွက် optimized Real-time အပြောင်းအလဲနဲ့အတူ POV ကင်မရာစျေးကွက်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကွာဟမှုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရှင်းလင်းမှု 800 HFR အလွယ်တကူမဆိုလျှောက်လွှာများတွင်အသုံးပြုခံရဖို့အဘို့အခွင့်ပြုခြင်း, ငါတို့စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စစ်မှန်သောကစားပွဲ-changer ဖြစ်လိမ့်မည်။ "
အဆိုပါရှင်းလင်းမှု 800-HD HFR အတွက်ကမ်းလှမ်း HD 8x (480 fps), နှင့် 800K အတူရှင်းလင်းမှု 4-4K (UHD) မှတက် 2x (120 fps) အထိမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကဒ်၏ခြေရာကိုထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့မပုံစံအချက်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကင်မရာကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပို့ဆောင်မကြာမီနောက်ကိုလိုက်ရန်ဖြစ်ပါသည် သာ 4.7 မြင့်မားသောလက်မ, 2.56 လက်မကျယ်ပြန့်နှင့် 1 လက်မထူသော။ အဆိုပါကင်မရာကိုတစ်ဦး 4K 7mp Micro နဲ့4/3လက်မအရွယ် CMOS ပုံရိပ်နှင့် 1080p ကိုအသုံးပြုသည် HD ထူးခြားတဲ့ပုံရိပ်တွေဘို့ဆစ်ဂနယ်။
အဆိုပါရှင်းလင်းမှု 800 အလွယ်တကူစက်မှုလုပ်ငန်း-စံဗီဒီယိုကိုဆာဗာများနှင့်အတူဖိုင်ဘာမှန်ဘီလူးနှင့်ပေါင်းစည်းမှုကနေတစ်ဆင့်ကို real-time အပြောင်းအလဲနဲ့အတူထုတ်လွှင့်ကင်မရာကို system အဖြစ် operating တစ်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်ဂေဟစနစ်သို့ပေါင်းစပ်။ Key ကို features တွေကင်မရာ၏ဆေးသုတ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် full-function ကိုကင်မရာကဝေးလံခေါင်သီ control panel မှ (RCP) တို့ပါဝင်သည်နှင့်တစ်ဦးအပြုသဘော-သော့ခတ်မှန်ဘီလူးမှန်ဘီလူးအာရုံကိုထိန်းချုပ်, မျက်ဝန်းနှင့် zoom ကိုမော်တာတွေနဲ့ mount ။
အဆိုပါရှင်းလင်းမှု 800 အဆိုပါ POV စျေးကွက်ပစ်မှတ်ထားကင်မရာ Bexel ရဲ့အသစ်မိသားစုအတွင်းပထမဆုံးမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအနာဂတျမှာကင်မရာမော်ဒယ် HD နှင့် 4K (UHD), တူညီသော system ကို design ကိုသုံးပြီး 2017 အတွက်နောက်ပိုင်းတွင်မိတ်ဆက်လိမ့်မည်။
"ဒီအရွယ်အစားနှင့်ဤအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူတစ်ဦးကကြံ့ခိုင်ပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ကင်မရာကိုကျနော်တို့လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် enviroments မှာအလွန်အမင်းနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုတွမ် Dickinson, အကြီးအကဲနည်းပညာအရာရှိ Bexel ကဆိုသည်။ အတွက် "HFR HD ဗီဒီယိုကိုချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်ထုတ်လွှင့်မယ့်နောက်ဆုံးပေါ်ကို formats များအတွက်ကြည့်ရှုသူဝယ်လိုအားများဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ယင်းအသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုသက်တမ်းကြာနှင့်အောင်မြင်သောပံ့ပိုးပေးသည့်အတိုင်း Bexel ကအမြင့်ဆုံး-ဖြစ်နိုင်သောရုပ်ပုံနှင့်အသံအရည်အသွေးထုတ်လုပ်ရန်ကြာသောအရာကိုနားလည်နိုင်သည်။ ဤသည်လိမ္မာပါးနပ်သည့်ရှင်းလင်းမှု 800 နောက်ကွယ်မှကားမောင်းသူဖြစ်၏။ "
အဆိုပါရှင်းလင်းမှု 800 ကင်မရာသီးသန့်အမေရိကတိုက်နှင့်ဥရောပ spanning တစ်ခုကျယ်ပြန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခြေရာသည့် Bexel နှင့်ကင်မရာ Corps, မှတစ်ဆင့်ငှားရရှိနိုင်ပါသည်။ ယင်းရှင်းလင်းမှု 800 နှင့်အခြား Bexel ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် bexel.com/clarity-camera/.
ထုတ်လွှင့်ထူးချွန်၏ 35 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုဂုဏ်ပြုသော, Bexel ကျွမ်းကျင်စွာကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးတယ်လီဗေးရှင်းဖြစ်ရပ်များအချို့တို့အတွက်မတူနိုင်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများနှင့်အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှုကယ်တင်တတ်၏။ Bexel အယူအဆမှပြီးစီးဖို့ဝန်ဆောင်မှု၏အနုပညာကျွမ်းကျင်ပြီ, နှင့်၎င်း၏ထူးခြားသောဖြေရှင်းချက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာအင်အားကြီးအကြောင်းအရာဖမ်းဆီးဖို့ထုတ်လွှင့်တပ်ဆင်။ Bexel ရဲ့အထူးပြုထုတ်လွှင့်ရာပူဇော်သက္ကာကိုဖိုင်ဘာ, အထူးကင်မရာများ, 4K ဖြေရှင်းနည်းများ, ဂရပ်ဖစ်, ထုံးစံ flypacks နှင့်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးအဖြစ်စနစ်များကိုပေါင်းစပ်, စီမံခန့်ခွဲန်ဆောင်မှုများ, လုပ်ငန်းဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချမှုများပါဝင်သည်။ 1981 ကတည်းက Bexel အစဉ်မပြတ်မြှင့်တင်ရန်နှင့်မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Bexel တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Vitec Group မှအမှတ်တံဆိပ်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Bexel/BEXEL_Clarity-Camera-NBA-Allstar.JPG
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Bexel ရှင်းလင်းမှု 800 အသေးစား HFR Point-of-ကြည့်ရန်ကင်မရာ
4K Bexel ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ကင်မရာ ရှင်းလင်းပြတ်သား 800 အချက် HFR HFR ပုံရိပ်တွေ ပေါင်းစည်းမှု တိုက်ရိုက်လွှထုတ်လုပ်မှု သေးသေးလေး POV အရွယ်ကင်မရာ SoftAtHome, MStar, CES2017 စံ နည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-02-28
ယခင်: Cinépolisသီးသန့်သူ့ရဲ့Cinépolis KLIC တိုက်ရိုက် OTT ဝန်ဆောင်မှုပါဝါမှ Verizon ကဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာန်ဆောင်မှုများရွေးချယ်
နောက်တစ်ခု: YouTube ကိုလူသားတွေဟာ၎င်း၏ဗီဒီယိုများအကဲခတ်တစ်ဦးကဘီလီယံနာရီတစ်ဦးကနေ့ဖြုန်းနေကြတယ်ဒါကဖော်ပြ